ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးသို့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ၅၂ ဒသမ ၁၂ - Yangon Media Group
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ၅၂ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂ဝ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ မွန်ပြည် နယ်တွင် ၈ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၄ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၃ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းဝင်ရောက် နေပြီး ရခိုင်၊ ကယားနှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့သို့ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့အများဆုံးဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြ ခြင်းသည် လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်ခြင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်တဲ့မြို့ကြီး တွေမှာ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုများတဲ့အတွက် ရန်ကုန်ကပထမ မန္တလေးကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် စက်မှုကဏ္ဍနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအများဆုံးဝင် ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အစမှ မတ် ၂ဝ ရက်အထိ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၂၂၂ ခုရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း ၁၁၉ ခုကို ခွင့်ပြုပေးထားကြောင်းသိရသည်။ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းစက်မှုကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအပါအဝင် အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်သည့်အပြင် ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုပိုများနေ ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာလမှ စတင် ဆောင်ရွက်မည့် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်ကြီးတွင် အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံခြား သားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင် ရောက်မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကခန့်မှန်းသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးလာရောက် ဆောင်ရွက်သည့်နိုင်ငံမှာ စင်ကာပူ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ကာ တတိယအများဆုံးနိုင်ငံမှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကော်မရှင်၏စာရင်းများအရ သိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လာမည့် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင်နိုင်ငံ ခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကန်ဒေါ်လာ ခြောက်ဘီလီယံဝင်ရောက်ရန် မျှော်မှန်းထားပြီး ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်ကျော်ပါက ကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံထက်ကျော်လွန် ဝင်ရောက်ရန် မျှော်မှန်းထား ကြောင်းသိရသည်။
ဝင်းစိန် ဆရာတော်ကြီး တည်ထားခဲ့သည့် အမြင့်ပေ ၁၈ဝ ရှိ ထိုင်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအ??
NLD နာယက ဦးတင်ဦးကို မန်ယူအသင်းက ဂျာစီတစ်ထည် လက်ဆောင်ပေး
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ခြောက် ခုတွင်လူဦးရေ တစ်သော??